NHOROONDO Counter Strike mutambo ► Counter Strike 1.6 Download
NHOROONDO Counter Strike mutambo
Nhoroondo ye Counter Strike:
Counter-strike ndeimwe yeakakurumbira munhu wekutanga-kupfura genre mutambo munhoroondo. Iyo ine yakareba, inonakidza, uye yakasarudzika nhoroondo yekutamba. Zvichida vazhinji venyu hamuzive nezve iyo nezve nhoroondo ye Counter-strike, Imwe yemitambo yemavhidhiyo yakatambwa nguva dzese. Semutambi iwe unofanirwa kuziva nezve shanduko ye Counter-strike kubva pane yakanyatso nyorwa, single-player runako nekukurumidza yakakanda mune imwe yeanonyanya kufarirwa, anotorwa zvakanyanya, uye anotamba mitambo yemavhidhiyo yenguva dzese. Icho ichokwadi chakajeka icho chakatora 17 beta vhezheni ye Counter-strike kuve mupenyu sechinhu chakazvimiririra munyika yemitambo. Kunyangwe uri mutambo wekare, vatambi vane hunyanzvi pamwe nemamiriyoni evanhu vachiri kutamba, uye vari kunakirwa Counter-strike.
Muna 1999, makore makumi maviri nemana apfuura, kubatana kweValve kwakagadzira mutambo wayo wekutanga, mutambo wekutanga-munhu wekutema unonzi Half-Life. Valve Corporation ipiyona we Counter-Strike. Iyo American Kambani inova muparidzi uye musimudziri wemitambo yemakomputa. Iyo Sierra Studios yakaburitsa hafu-hupenyu ine hombe, bang uye vatambi vanobva kumativi ese epasi vakaguma voda mutambo. Counter-strike inokurumidza kuve inozivikanwa pakati pevatambi zvekuti nharaunda yese yakavandudzwa yakatenderedza, uye programmers vakatanga kugadzira mamods ega ega.
Ivo veCanada programmers Minh Le neshamwari yake Jess Cliffe, vanogadzira beta vhezheni yeHalf-Life mod, Counter-Strike. Zvakavatorera imwe nehafu mwedzi yekukodha kuti vagadzire yekutanga beta vhezheni yeHalf-Hupenyu.
Min Le naJess Cliffe vakaenderera mberi nekurwira kwavo kugadzira mabetas uye zvakare vakagadzira webhusaiti yeCS. Pakutanga kwaingova nemamepu mana chete uye pfumbamwe zvombo mukati Counter-Strike, zvisinei, mamiriro akakurumbira aive achiripo. Vanhu vaigara vachitamba 5v5 kufora vachisarudza kuve Counter-gandanga kana gandanga, uyezve zvikwata zviviri izvi zvinoshandiswa nhasi. Nekufamba kwenguva, Counter-Strike yakakwevera tarisiro uye vanhu vanopedzisira vada mutambo.
Valve Matanho Mu:
Nekuda kwekuwedzera mukurumbira we Counter-Strike uye mushure memakore maviri enharaunda-akavakirwa mods, Vhidhiyo vanogadzira mutambo Valve akabata ziso ravo ndokuhaya Le naCliffe mushure mekuburitswa kwechishanu beta muna 2000. Valve yakawana Counter-Strike uye programmers Minh Le naJess Cliffe vakatanga kushanda naValve. Counter-Strike yakazoburitswa PC munaGunyana 2000, ichiita kuitisa zviri pamutemo iyo Counter-Strike dzakatevedzana.
Mukuru wekutanga akaburitswa ne Counter-Strike yakanga iine mepu mbiri dzakakurumbira, Assault (cs_assault) uye Cobblestone (de_cabble) uye yaitambidzwa pane imwe nyika chete. Semod mod, yaive nekutevera kukuru asi mushure mekuburitswa kwepamutemo nhevedzano ye counter strike yePC yakawedzera mukurumbira wayo kumazhinji akapetwa pakati pevanhu.
Nharaunda ye Counter-Strike yakawedzera kukura nekuti vanhu vazhinji vakatanga kutamba mutambo. Kukwira kwemukurumbira kwaive kwakatanhamara sezvo kwaitambirwa pasirese. Multiplayer yaivapo kare, asi Counter-Strike chaive chimwe chinhu uye zvaive nyore kungopinda mumutambo. Pakanga pasina chikonzero chekushandisa maawa akati wandei pamberi pekombuta kutamba mutambo neshamwari kana vausingazive. Vanhu vaigona kutamba kwemaminetsi mashoma kana mazuva zvinoenderana nenguva iripo. Waive wakasarudzika uye uri nyore mutambo wekutamba asi zvakaoma kuve tenzi. Nekuda kwemaitiro ayo akasarudzika uye akaoma hunhu, inova inozivikanwa pakati pevatambi. Iwo mutambo wevhidhiyo wakagadzirwa nevanhu wepro. Inoonekwa seimwe yeanonyanya kukurudzira mitambo yevatambi yakambogadzirwa. Munyika yanhasi, iwe unogona kuona yakawanda yevanamakanika Counter-Strike yakaitwa, kana zvirinani yakabatsira kugovera kuburikidza nemukurumbira wayo.
Mavhezheni uye kugadzirisa kwe Counter-Strike:
Iko kusati kwamboitika kusimuka kwe CS uye kugona kwayo kukwezva vanhu vakatungamira vanogadzira vanoita zvakawanda kuita kuti mutambo uyu unyanye kunakidza uye kufadze vanhu. Vavariro dzevanhu dzinova mazano, uye ivo programmers vakachinja iwo mazano kuita chokwadi. Valve corporation yakaunza Its Anti- Cheat system (VAC) muna 2002. Sisitimu iyi inoita kuti zvinyanye kubiridzira kana kubira, uye kana mutambi akaedza kudaro, aigona kurambidzwa nekukasira. Valve yakaunza mamamepu matsva uye zvombo zvegandanga neCounter gandanga mu Counter-Strike vhezheni 1.1 muna 2003.
Valve, Ritual Varaidzo uye Turtle Rock Studios yakagadzirwa Counter-Strike: Mamiriro ezvinhu Zero muna 2004 uye akaburitswa kuti anzwe neSierra. Iyo ine zvese zviri zviviri zveye-single-mutambi uye multiplayer modes. Ivo programmers vakangoteedzera neumwechete mushandirapamwe unonzi "Izvo Zvakadzimwa Zviratidzo". Ivo zvakare vanovandudza iwo magiraidhi, zvisinei, zvaiita zvisirizvo. Vazhinji vatambi havana kuzviwana zvakakodzera uye havana kufarira kuchinjira kuchitsva Counter-Strike shanduro. Ivo havana kugutsikana nemutambo mutsva uye vakasarudza vekare Counter-Strike pamusoro Counter-Strike: Mamiriro ezvinhu Zero. Sezvo nguva inopfuura, Valve yakaunza nyowani ye Counter-Strike se Counter-Strike: Kunobva, uye Counter-Strike: Inogumbura Pasi Pose muna 2010
Mushure mekudzokororwa kwakawanda uye zviuru zvekuvandudzwa, vharafu yakabatsira kushandura mutambo kuita izvo zviripo nhasi. Vakaramba vachishanda mukati Counter-Strike zvinoenderana nezvido zvevateveri nenharaunda izvo zvinoita CS kwete chete yakanakisa vhidhiyo mutambo wakambove asi zvakare wakaupawo unogara kwenguva refu unodiwa mutambo wepasirese. Makumi maviri nerimwe gore mushure mekutanga Counter-Strike, ichiri kurarama uye mamirioni avanhu kutenderera pasirese vachiri kuda kutamba CS. Munzira dzese iwo mutambo wakakwana nekuti une chiyero chakaringana mushandisi-hushamwari uye kukwikwidza. Counter-strike iri nyore kudzidza mutambo, asi zvakaoma kugona. Ichatambirwa kumazera anotevera.
Iwe unogona zvakare kufarira imwe vhezheni ye counter-strike: COUNTER-STRIKE 1.6 download mahara